Soomaali - Frilagret
Waa maxay Frilagret?
Frilagret waa xaruntaada dhaqanka. Waxay ku talaa magaalada dhexdeeda. Haalkan adigaa goaankeeda iska leh. Wax kasta ka dhacay guriga waxaa la tix galinataa rayigaaga iyo rabitaankaaga.
Adigaagan da yarta ah 13 iyo 30 ayaa lagu xisaabtamayaa in ay kuu furan tahay guriga dhaqanku.
Booqayaasha waa la soo dhaweyn dabcan inkastoy dadoodu jirto. Hadaba kaalay o ona soo mar maqaaxida lagu cabo Kafeega ama keligaa kaalay ama cid soo kaxayso.
Guriga dhaqanku waa meel banaan markaad doontana kuu banaan.
Waxaad qabanqaabin kartaa wax walba oo ka riwaayada hacker meetups, workshops, muxaadarooyin, bandhigyada fashion, iyo wax ka badan. Waxa jira Korkiinna bakhaarka, haddii aad hayso fikrad ah oo aad rabto in aad wax kharash ah hirgeliyo si fadlan nala soo xiriir e-mail si frilagret@kultur.goteborg.se